Wakadzivirira Kakombiyuta Yako Kubva Botnet Attack? - Kana Kwete, Tevera I Semalt Tips
Nik Chaykovskiy, the Semalt Mutengi Achibudirira Mutevedzeri, anotaura kuti mabhota anowanzobatanidzwa ne "zombie kombiyuta," iyo inowanzobatwa nekombiyuta uye inotungamirirwa nemunhu ari kure. Muzviitiko izvi, mutengesi wekutsvaga muInternet anotanga mirairo sekutumira spam kana kurwisa mamwe makombiyuta. A bot is software yakaipa iyo inokwanisa kukwanisa nekugamuchira ruzivo kubva kune imwe nzvimbo iri kure yakasara ye Command and Control (C & C) seva. Iro robot inogona kushandiswa nevanhu vane vavariro dzakaipa kukuvadza nekukuvadza kune avo vakaurayiwa. Munguva yakapfuura, mabhoti ave achibatanidzwa ne-cyber-crime dzakawanda dzakadai seDDoS kutambudzwa. Vanhu vane mabhizimusi evepanhau vanozivikanwa nemimwe tsvuku tsvuku - silo monitoring system. Semuenzaniso, Google, Yahoo, uye Bing vanoshandisa bots sevashandisi vewebhu kuti vaende kune mawebsite uye vatore mashoko anokosha ewebsite.
Chii chinonzi botnet
Rimwe bhodhi rinoumba hutano hwebhodeni. Bhoti purogiramu iri nyore iyo code inobvumira kuti iite mirairo kubva kune imwe nzvimbo iri kure. Iyo bot inofanira kuwana nzira yayo nenzira yakatsauka kumakombiyuta. Kubva pano, bot inofanira kutaurirana kuMirairo uye Chengetedza kureva server. Uyo anorwisa achange achishandisa purogiramu yevashandi kuti atange kurwisa pamusoro peyi network ye botnets.
Kana purogiramu yacho ichinyorwa, imwe tsvuku yekasi yedhigiri inoreva kuiparidzira kune vakaurayiwa. Mahombekiti makuru emabhodhoro anosangana nemakombiyuta anopfuura 20 000. Vakatambudza vanoshandisa mazano ekuita vanhu kuisa malware avo pamakombiyuta avo. Somuenzaniso, vanhu vanogona kusarudza kutumira spam emails kune vatengi vavo. Aya maeils angave ane zvinokuvadza uye nehuwandu hwehupfumi. Vamwe vanhu vanogona kutumira zvinyorwa zvine malware neTrojans..Izvi zvinoshandiswa zvinoshandiswa kumushandi wekupedzisira wekombiyuta, ndiani anowanzoshungurudzwa.
Bhoti dzinofanira kuramba dziri muhutano hwehutano Hutsotsi idzi dzinotaurirana kune humwe dzichitevera nzira dzakadai se:
Edza kufanana. Mabhoti aya anotaurirana uye anotumira mirairo kune mumwe nemumwe. Zvisinei, mudzidzisi wekombiki anogona kugadzirisa kutaurirana kwepakati mukati mebhoti yebhogi.
C & C kusvika kune botnet. Iyi ndiyo nzira yakadzika yemirayiridzo. Munhu anorwisa anotumira mirayiridzo yakananga kumusangano kubva kumushandi weC & C. Apa ndipo pavanoita zvirwere zvakawanda.
Nzira yeHybrid Iyi nzira inobatanidza matanho ari pamusoro apa.
Vanhu vanogona kukwanisa kuuraya zvirwere zvakawanda zvebhodeni nekubatsirwa kwebhod network. Somuenzaniso, vamwe vashandisi vangazotanga kutumira spam emails. Mukati yapfuura yapfuura, mhosva dzakadai sedhaka dzekutsvaga nguva dzose dzaive nguva yekugadzirisa basa. Semuenzaniso, kumanikidzwa kwemichina kunopesana nehutano hwehutaneti. Vashandi vanochengetedza nhepfenyuro yakajeka pamakombiyuta avo panjodzi yekurasikirwa iyo yose kuvaseki. Somuenzaniso, kubhadha kadhi rechikwereti, kubavha kwezvemari, uye kurasikirwa kwezvinyorwa zvekutumira.
Zvakakosha kudzidza kuti ungadzivirira sei botnet kurwisa. Muzviitiko zvakawanda, mabhutoni anotanga nemapurogiramu anonyadzisira anowanikwa mumakombiyuta evanhu pasina ruzivo rwavo. Muzviitiko izvi zvose, kuziva kunogona kuvandudza hukama hwekuchengeteka. Hurumende inogona kukwanisa kuita kuti vagari vese vagare vakachengeteka kubva kune vanoita zvemhosva.